ओलीले बैशाख २७ मा संसदबाटै दिएका थिए संसद विघटनको सुइँको ! - Kantipath.com
ओलीले बैशाख २७ मा संसदबाटै दिएका थिए संसद विघटनको सुइँको !
क्याबिनेटले आज गरेको निर्णय र सिफारिश बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको सरकार गठन गर्न २४ घण्टे म्याद दिएपछि भोलि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सम्भावना देखिएको छ ।
आजको भोलि २४ घण्टा नबित्दै संविधानको एउटा धाराबाट अर्को धारामा जम्प गरेर नयाँ सरकार गठन गर्न व्यवहारतः १२ घण्टाको समय दिइएको छ । अहिले राती त्यो काम नहुने भएपछि भोलि दिनभरमा वैकल्पिक सरकारमा दावी प्रस्तुत हुने सम्भावनै देखिँदैन ।यता भोलि नै विश्वासको मतको लागि रातभरिमा कसैले दाबी गर्न नसक्ने ठोकुवाका साथ त्यसपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको रोडम्याप स्पष्ट हुँदै गएको छ । स्रोत भन्छ ‘भोलि साँझ प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्छ । अनि १५ गते अध्यादेशबाट बजेट आउँछ ।’
संसद विघटन सम्बन्धी संकेत ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिने दिन नै गरेका थिए । संसदमा आफूलाई विश्वासको मत दिए संसद विघटन नहुने बताएका थिए। विश्वासको मतमाथि नेताहरुले राखेको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा उनले आफूलाई भोट नदिए संसद विघटन हुन सक्ने संकेत गरेका थिए। उनले भने, ‘मलाई भोट दिनुहोस, संसद विघटन हुँदैन। भोट नदिने विघटनतिर धकेल्ने। म के गरु?’
उनले आफूलाई भोट दिएर स्थरिता दिन पनि आग्रह गरेका थिए । उनले त्यसैका लागि आफूले विश्वासको मत मागेको बताए। उनले आफू स्थिरता विरोधी भएको भए च्याट्टै राजीनामा दिइसक्थें भनेका थिए।
उनले मुद्दा लडेर फिर्ता ल्याएको संसद बचाउन आफूलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले भने ‘संसद् विघटन फेरि होला कि भन्ने चिन्ता छ? ए बाबा, मत दिनुस् न, कसरी विघटन हुन्छ? आफैं मत नदिइकन विघटनतिर धकेल्ने अनि अर्कालाई अपजस् लगाउने । त्यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओलीले पुनः संसद विघटन गर्ने चिन्ता भएको बताएका थिए ।
Previous Previous post: विपक्षीका गोटी बन्नेको नाटक मञ्चनको मुकुण्डो उदांगो भयो : इश्वर पोखरेल
Next Next post: ओली विवादमा तानिएपछि सपथबाट हट्यो ‘प्रतिज्ञा’ शब्द